Ikpe anyi maka nwa amaala Saint Lucia
Anyị Okwu nke Amaala Saint Lucia
Enwere ọtụtụ ihe ị ga-atụle mgbe ị na-ahọrọ obodo maka ụmụ amaala site na itinye ego. Anyị echepụtala ụmụ amaala site na mmemme itinye ego na ebumnuche ndị niile chọrọ ịga akwụkwọ. Si anyị anọ pụrụ iche ego nyiwe, ka anyị kwa afọ okpu nke J.Randall investors, ka anyị na-adọrọ mmasị na omenala njikọ aka, anyị na-agba gị ume ka anyị nwee obi ụtọ ndụ na ọganihu na anyị.
Ego nke itinye ego na Saint Lucia maka ebumnuche nke ịbụ nwa amaala ka ahaziri na mmemme ndị yiri ya. Ndị anamachọ ihe nwere nhọrọ nke nhọrọ anọ sitere na ọnụọgụ ego nke US $ 100,000 na US $ 3,500,000 maka otu onye na-arịọ arịrịọ. A na-atụ anya na ndị na-achọ ọrụ ga-akwụ ụgwọ nhazi na nchịkwa nchịkwa metụtara na ngwa ha.
A ga-ahazi akwụkwọ anamachọi maka ụmụ amaala site na itinye ego na Saint Lucia n'ime ọnwa atọ nke enwetara nkwado maka nhazi nke ụmụ amaala site na Ngalaba Ndabere.
N’afọ 2019, ụmụ amaala Saint Lucian enweghị visa ma ọ bụ visa ha rutere n’obodo na ókèala karịrị otu narị na iri anọ na ise (145), na-ahụ ọkwa Saint Lucian nkịtị na 31st n’ụwa dịka akụkọ Henley Passport na Global Mobility Report 2019.
Citizensmụ amaala Saint Lucian nwere ike ịnụ ụtọ ịnweta ọtụtụ mba gụnyere ndị nọ na European Union, akụkụ ndị ọzọ nke Caribbean na South America.
Saint Lucia nwere ndu ndu nke otutu ebe na uwa juputara. Anyị nwere ọnụ ọgụgụ dị nta nke ime mpụ, ịnweta akụrụngwa, ọrụ na akụrụngwa ọgbara ọhụrụ, ụlọ oriri na ọ classụ classụ na ụlọ oriri na ọ worldụ worldụ ụwa na isi ala.
Ndị bi n'ebe ahụ nwere nhọrọ nke ibi nso n'obodo ndị bụ́ isi ma ọ bụ nso na ime obodo ka ịdị jụụ iji bie ndụ ndụ. Ọ na-ewe naanị otu awa iji si ugwu ugwu gaa na ndịda agwaetiti ahụ n’ụbọchị okporo ụzọ dị mfe, yabụ enweghị ebe dị anya.
Anyị na-enwe oge okpomọkụ dị n'etiti 77 Celsius F (25 Celsius C) na 80 Celsius F (27 Celsius C) n'otu afọ nke ihu igwe na-ekpo ọkụ nke ikuku na-azụ ahịa guzoziri eguzozi. Oke mmiri ozuzo na-adị naanị nkeji ole na ole n'otu oge belụsọ ma ọ bụrụ na enwere usoro ihu igwe ama ama na egwuregwu.
Onye ọ bụla na-etinye akwụkwọ maka ụmụ amaala site na itinye ego na Saint Lucia ga-eme nke a site n'aka onye ọrụ ikike. Enyerela akwụkwọ nyocha nke SL1 nye onye anamachọ ihe ọ bụla. Akwukwo Ederede na-egosi ihe onye na-arịọ arịrịọ ọ bụla ga-enye iji mejupụta ngwa ha.